Fabio Capello oo ka warbixiyay dhibaatooyinka heysta kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkan – Gool FM
(Madrid) 21 Mar 2020. Macalinka reer Talyaani ee Fabio Capello ayaa cadeeyay dhibaatooyinka ugu waa weyn ay la dhibtooneyso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xilli ciyaareedkan tartamada maxaliga ah iyo kuwa Yurub.
Fabio Capello ayaa dhinaca kale tilmaamay in kooxda Los Blancos aysan laheyn tayo wanaagsan iyo ciyaartoy saameyn ku leh garoonka dhexdiisa.
Macalinka reer Talyaani ayaa soo maamulay kooxda kubadda cagta Real Madrid laba xilli ciyaareed kala duwan ee kala ah 1996-1997 iyo sidoo kale 2006-2007, wuxuuna labada xilliba kula guuleystay koobka horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Capello ayaa aaminsan in dhibaatada ugu weyn ee kooxda Real Madrid heysata ay tahay bixitaanka Cristiano Ronaldo, kaasoo go’aamin jiray dhamaan kulamada ay ciyaarayaan.
Los Blancos ayaa waxay haatan ku xisaabtameysaa kaliya ciyaartooy da’ayar ah oo u baahan in la siiyo waqti dheer si ay u ,muujiyaan shaqsiyadooda islamarkaana ay kooxda u hogaamiyaan.
Haddaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Macalinka reer Talyaani ee Fabio Capello waxaana uu yiri:
“Mararka qaar waxaa heysata dhibaatooyin, halka mararka qaarna ay u ciyaaraan si fiican.”
“Kooxda waxay u baahan tahay hoggaamiyeyaal, kooxda waa inay lahaato halbeeg, iyo qof saaxiibadiis ku hoggaamin kara guul, xilligeygii waxaan heystay Raul, Fernando Hierro iyo Redondo, kuwaasoo had iyo jeer doonayay inay guuleystaan.”
“Hadda ma joogo Ronaldo? Waxaan xasuustaa wariye falaqeeye ka ah TV oo dhihi jiray hadaad rabto inaad garaacdo Real Madrid waa inaad dhalisaa ugu yaraan laba gool, sababtoo ah waxaad ogtahay in Ronaldo uu gool dhalin doono, si la mid ah Messi-na uu joogo Barcelona.”
“Real Madrid waxay u baahan tahay in la cusbooneysiiyo, laakiin si taxaddar leh, waa inay la soo saxiixataa ciyaartooy sameyn karta farqi, sababtoo ah markaad xiran tahay maaliyada Real Madrid ama Barcelona, waa maaliyad culus, haddii aadan laheyn tayo badan, waxaad la kulmi doontaa dhibaato.”